के गर्दैछन् पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली ? – Krishionline
काठमाडौं, बैशाख ।२०७२ साल आषाढ १५ गते धान दिवसका दिन रोपाइँ काण्डका कारण मन्त्री पदबाट बाहिरिएका पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली के गर्दै होलान् भन्ने कुरा धेरैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । त्यसबेला जति विवाद देखियो त्यो विवादले उनलाई पटक्कै छोएको पनि छैन । रोपाइँ काण्डले सामाजिक सञ्जाल रंगियो, संसदमा हंगामा मच्चियो, उनकै पार्टी भित्र पनि एकथरी उनका विपक्षमा उभिएका थिए । ख्याल ख्यालमा नै उनको कृषि मन्त्रीको पद गयो । न विरानु न डराउनु भन्ने उक्ति पराजुलीले मनमा राखि रहे । र त अहिले पनि उनी कृषि क्षेत्रमा नै सक्रिय रुपमा लागि रहेका छन् । बलेको आगो ताप्ने हाम्रो समाजमा कृषि मन्त्री पदमा रहँदा पराजुलीबाट धेरै फाइदा उठाएका कर्मचारीहरु व्यक्तिहरु अहिले विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका पनि छन् । धेरैले फरक फरक किसिमको फाइदा उठाए पनि तर ती व्यक्तिहरु पराजुलीको सम्पर्कभन्दा बाहिर छन् । कृषि विकास मन्त्रालयमा रहेको कतिपय व्यक्ति उनको नाम नै सुन्न चाहँदैनन् । किन कि हरिप्रसाद पराजुली कृषि मन्त्री हुँदा मज्जाले व्यक्तिगत स्वार्थ लुटे । अव पराजुली निभेको आगो भएका छन् त्यसकारण पनि उनका नाम लिन नचाहने कृषि विकास मन्त्रालयमा नै उनकै मान्छेहरु छन् ।
पूर्व कृषि मन्त्रीहरु मध्ये धेरैले कृषि क्षेत्रमा सक्रिय भएका छैनन् । त्यसबेला निकै नै विवादित भएका पराजुली के गर्दै छन् भन्ने हामीले चासो लिने प्रयास ग¥यौं । पूर्व कृषि मन्त्री पराजुलीलाई भेट्यौ र उनका कृषि विकासका कुरा धेरै सुन्यौं । उनी हराएका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा नै तल्लीन भएर लागेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष पराजुलीले नयाँ कृषि अभियान सहकारीको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा जिल्ला जिल्ला गएर किसानहरुलाई प्रशिक्षण दिदै हिडिरहेका छन् ।
उनी भन्छन्,‘कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन विग्रँदै गएको छ । कृषिको अनुदान किसानसम्म पुग्नै सकेन । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विक्रीका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने काम उनले मन्त्री हुँदा गर्न सकिन भन्छन् । ’
केही समय कृषि मन्त्रीका रुपमा बसिरहेको भए अहिलेको जस्तो कृषिमा अनुदान नभएर किसानकै हातमा पुग्ने गरी किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विक्रीका आधारमा अनुदान दिने तयारी गरिरहेका थिए । दूर्भाग्य उनलाई धान काण्डले तान्यो । त्यस बेलाको परिस्थिति बारे उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई (आफूलाई) सिध्याउने नियतमा गरिएको खेल हो । अरु कुरा भन्न चाहन्न’ उनी सुनाउँछन् ।
तर पनि उनी भागेका छैनन् किसानकै माझमा गएर विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्दै जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्ने थियो किन भएका छैनौं ? उनी प्रतिप्रश्न गर्दछन् ।
आफ्नै पालामा तयार गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि सोचे अनुरुपको काम नगरेको पराजुलीको भनाई छ । जोन, सुपर जोन, पकेट र व्लक भन्दैमा कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । हामीले खोजेको सुपर जोन अहिले कार्यान्वयमा ल्याएको जस्तो होइन यसले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि कुनै हालतमा हुँदैन उनी ठोकुवा गर्दछन् । उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि निश्चित क्षेत्रलाई जोन वा सुपर जोन बनाउने हो भने हाम्रो आवश्यकताका आधारमा बस्तु तथा बाली उत्पादन गर्नु पर्दछ । तर क्षेत्रफलका आधारमा उत्पादन गरेर कागजमा उत्पादन बृद्धि देखाएर कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समयमा कृषि विकास मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनाका बारेमा कृषि अनलाईनको प्रश्नमा उनले भने उँट जस्तो संरचना बनाउने अनि उत्पादकत्व बृद्धि गर्छु भन्ने हावादारी गफले कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ बन्दैन । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानको आवश्यकता केहो मुलुकको आवश्यकता के हो सो अनुरुप लगानी गर्नु पर्ने उनको भनाई छ तर त्यसो हुन दिंदैनन् उनको आरोप पनि छ ।
श्रीलङ्कामा खडेरीका कारण पाँच लाख नागरिक प्रभावित